Qabxiilee ijoo wayita Kaartaa Guugil (Google Map) fayyadamtan beekuu qabdan! – ኢትዮጵያ ቼክ
Qabxiilee ijoo wayita Kaartaa Guugil (Google Map) fayyadamtan beekuu qabdan!
Kaartaan Guugil (Google Map) suuraa saatalaayitii bakkeewwanii, daandiiwwanii, daangaalee, sochii tiraafikaafi kunneen biroo ilaaluuf kan nufayyadu dha.
Kaartaan Guugil tajaajilawwan kunneen fayyadamtootaaf dhiyeessuuf suuraa saatalaayitii, ragaalee dhaabbilee mootummaafi miti mootummaa, odeeffannoowwan fayyadamtootarraa ergamaniif fi maddoota odeeffannoo biroorraa argatu fayyadama.
Kaartaan Guugil iddoowwan haala salphaa ta’een akka barru gochuun cinatti haala waqtaawaa yeroo walitti bu’iinsaa jiru caalmaatti hubachuufis nugargaara.
Yeroo dhiyootii as biyya keenya keessattis namootni yoomessa walitti bu’iinsaa baruuf Kaartaa Guugilitti yeroo fayyadaman mul’ata.
Namootni tokko tokko kallattiin Kaartaa Guugil yemmuu fayyadaman kan biroon immoo kaartaa gulaalame (‘edit’ tolfame) fayyadamu.
Kaartaawwan gulaalaman namootafi gareewwan “walitti bu’iinsota ni hordofna” jedhaniin yeroo yeroon kan haaromfaman (Update) yemmuu ta’u, bakkeewwan walitti bu’iinsi itti jirufi iddoowwan gareelee walitti bu’iinsichaan to’ataman agarsiisuuf yaalu.
Haa ta’u malee namootni dhuunfaafi gareeleen kaartaa kana hojjetan kunneen odeeffannoo miidiyaalee, ibsawwan, miidiyaalee hawaasummaafi rogeeyyii fedhii dhuunfaa qaban irraa argatanirratti hundaa’uun kan hojjetan ta’uu isaaniitiin kaartaan isaan gulaalanii dhiyeessan sirrii ta’uu dhiisuu danda’a.
Gama biraatiin dhimmoota Kaartaa Guugil baay’inaan itti fayyadamnu keessaa inni biraan immoo daangaalee ittiin ilaaludha.
Kaartaan Guugil daangaalee biyyaalee, naannolee, godinaalee, aanaalee akkasumas magaalotaa kan agarsiisu yemmuu ta’u daangaaleen kunneen garuu ‘guutumaan guututti sirriidha’ jechuun hin danda’amu.
Dhaabbatni Guugil dhimma daangaaleen walqabatee komiifi himannaawwan siyaasaafi seeraa irra deddeebiin irratti dhiyaachaa turan bu’ureeffachuun bifa icciitiifi ofeeggannoo qabuun hojjechuu akka eegale himamus ammallee dogongorawwan gurguddoo ni mul’atu.
Kaartaan Guugil kaartaawwan seera qabeessaa Itoophiyaa keessaa waliin walbira qabamee yeroo ilaallamus daangaaleen bifa dogongoraan sararaman darbee darbee irratti mul’atu.
Miidiyaaleen tokko tokkos kaartaalee dogongoraa Kaartaa Guugil irraa fudhatanii yeroo fayyadaman ni mul’ata.
Kanaafis daangaaleen naannolee, godinaalee, aanaaleefi magaalotaa Kaartaa Guugil irratti agarru guutumaan guututti sirrii ta’uu dhiisuu waan danda’anif kaartaalee kunneen qooduu keenyaan dura of eeggannoo gochuun barbaachisaadha.
Odeeffannoowwan Kaartaa Guugil (Google Map) irra jiran dogongora jettanii kan yaaddan yoo ta’e haala armaan gadiin komii keessan dhiyeeffachuu dandeessu.
1. Mosaajii Kaartaa Guugil (Google Map) banaa
2. Suuraa pirofaayilii akkaawuntii Guugil keessan irratti cuqaasaa
3. Itti aansuun ‘Help & feedback’ kan jedhu cuqaasaa
4. Itti aansuun gosa dubdeebii (feedback option) filadhaa. Dhumarrattis dogongora sirreeffamuu qaba jettan barreessaa.